SomaliTalk.com » xulashada
Home » Qoraallada Halkudhegga "xulashada"
TAARIIKHDA IYO GABAYADII XAAJI AADAN AF-QALOOC
Xulashada jimcaha ee toddobaadkan, waxaan ku soo qaadan doonnaa qaybo ka mid ah suugaanta iyo sooyaalka halgamaagii Soomaaliyeed ee Xaaji Aadan ( Afqallooc). Xaaji Aadan Axmed oo lagu naaneysi jiray “Afqallooc” wuu ku dhashay miyiga Ceerigaabo qiyaasihii 1864kii. Waa mid ka mid ah geesiyaasha Soomaaliyeed ee halganka dheer u soo galay sidii ay Ummadda Soomaaliyeed uga xoroobi lahayd gumesteyaashii...
Xulashada Jimacaha Somalitalk ee toddobaadkan, waxaan ku soo qaadanaynaa xasuuqii ay ciidamada Kenya ka gesyteen magaalada Wagalla ee dhulka Soomaaliyeed ee NFD, muddo hadda laga joogo 30 sanadood. Markey taariikhdu aheyd 8dii Febraayo 1984, goor habeennimo ah, ayuu kulan qarsoodi ahaa oo ay albaabadu u xiranyihiin uu ka dhacay aqalka dowladda ee degmada Wajeer. Kulankaas oo ahaa mid heer sare ah waxaa...
BAAQA 1aad: Soo-rogaal-celinta Soomaliyeed | Dr. Cumar Cusmaan Raabe
XULASHADA JIMCADA: Qoraalkan waa dardaaran uu ka tegey Dr. Cumar Cusmaan Raabeh Allah ha u naxariistee, waxana SomaliTalk hore u daabacday May 7, 2011. Waa kan qoraalkii… Soomaaliyey!… I. Haddii Qaranka Soomaliyeed la waayo Qayb haraysaa ma jirto wixii “shanta Soomaliyeed” la oran jiray”. Haddi qaranka Soomaliyeed la waayo qolla haraysa ma jirto. Haddii Qaranka Soomaaliyeed...
Halkudheg: Raabeh, xulashada
Xulashada Jimcaha ee SomaliTalk: Qiimaha Qaranimo – C/risaaq Xaaji Xuseen
Qabyaalada Iyo Qurunkeeda – Videow-ga aan maanta ku soo qaadanayno barnaamijka XULASHADA JIMCAHA waa khudbad aad u qiimo badan oo uu ka tagay Alle ha u naxarasiitee C/Risaaq X. Xuuseen. Qaybaha kale ee Xulashada Jimcaha ka akhri: http://somalitalk.com/tag/xulashada/ Read More →